Rehefa mandia tany hoy ilay fitenenana izay dia tsy maintsy solafaka ka mihevi-tena ho matin-kambo aho raha hitonon-tena ho « intègre » araky ny filazanao azy.
Raha tanisaina aby izay efa nanjo sy niheratana hatramizay, dia ho lava ny soratra. Ny mahatanlajona dia ny fitodiha-doha ny samy mpiarambelona, ary ny tsy fisiana intsony ny firaisankina eo @ fiarahamonina . Ny tena koa tsy hafaka dia mitroatra loatra indraindray zay, fa vetivety kely dia ataon’ny sasany hoe matimkambo. Nefa tsy hay ny hangiana sy ny hiravotànana fotsiny, ny fery aza manaikitra kà ny fitiavana ny tany sy ny malagasy mbola ambony. Dia marary ny aina rehefa mahita an’ireo nitolobàtana ho mpitondra firenena, kà lasa ataon’drizalahy kianja filalaovana maloto ny sehatra politika, eo etsy andaniny ny mpitaty rà-kena, manao ny mampirisika no sady manambitamby, nefa ny spekta efa marikivy dia mitsoka sifflet hoe « aoka zay eee ! »